Dowladda Sucuudiga oo shaacisay Xujayda Sanadkaan dhimatay iyo dalalkooda. – Radio Daljir
Dowladda Sucuudiga oo shaacisay Xujayda Sanadkaan dhimatay iyo dalalkooda.
Seteembar 15, 2016 10:07 g 0
Maka, Sep 16 2016–Boqortooyada Sucuudiga ayaa shaacisay tirada dadka ku dhintay sanadkan gudashada waajibaadka xajka oo shalay lagu soo gebagebeeyey magaalooyinka barakeysan ee wadankaas.
Fahad Abuu Daalib ayaa sheegay in marka laga reebo dadka Shiicada ah inta kale ay dalbadeen in lagu aaso Sucuudiga dadka ku dhintay Xajka.
Meydadka Lixda Xaaji ee u dhashay Ciraaq oo ka soo jeeda dadka Shiicada ah ayey ehelladooda dalbadeen in dalkooda dib loogu celiyo.